Mediam-bahoaka · Oktobra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Oktobra, 2019
Jolay 2022 4 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Oktobra, 2019
Portiogey mpihira rap, miteraka adihevitra noho ny fanehoana ny herisetra an-tokantrano ao anatin'ny lahatsary vaovao
Fikambanana amam-polony maro mpiaro ny zon'ny vehivavy no nitsikera ilay mpihira rap Valete, izay namaly tamin'ny filazàna fa "poakaty" ilay adihevitra.
Azia Atsimo 31 Oktobra 2019
"Tena ilaina ny fahitàna tsara ireo Desi mpanakanto mba hamoronana fiarahamonina iray liampandrosoana sy mivoatra ara-kolontsaina."
Tamin'ny 14 Oktobra 2019, nesorin'ny Fitsaram-paritr'i Taipei ny fitoriana napetrak'ireo mpanjono Vietnamiana 8.000 tamin'ny Formosa Plastics Group ao Taiwan (FPG) noho ny loza an-dranomasina tamin'ny taona 2016 tany Vietnam. Nilaza ny fitsarana fa tsy manana fahefana hisahana an'io raharaha io izy ireo, saingy nampiakatra ny raharaha any amin'ny fitsarana ambony ny mpisolovavan'ireo mpitory tamin'ny 24 Oktobra.
Blaogim-Piarahamonina GV 31 Oktobra 2019
Satria hoe natao ho an'ny rehetra ve ilay izy dia midika izany fa tokony hampiasainao? Mamakivaky ny fitsipika fampiasana ireo fitsanisàna natao ho an'ny daholobe avy amin'ireo mpampiasa tambajotra sosialy i Oiwan.
Fantaro i Lokosh (Joshua D. Hinson), mpampiantrano ny kaonty Twitter-n'ny @NativeLangsTech ny 3-9 Oktobra
Antsafa 31 Oktobra 2019
Fantaro i Lokosh (Joshua D. Hinson), mpampiantrano ny kaonty Twitter-n'ny @NativeLangsTech ny 3-9 Oktobra 2019. Hizara ny fomba fijeriny ny teny Chickasaw izy.
Vakio ny resadresaka nifanaovana tamin'i Farhad Shafitul Kabir, ilay hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline mandritra ny 29 Oktobra ka hatramin'ny 4 Novambra 2019. Hiresaka momba ny fiteny Sylheti Nagri izy.